Cabsida dadka soo wajahda | Suomen Mielenterveysseura
Heikki wuxuu xusuustaa yaraantiisi inuu ahaa wiil xishood badan oo wuxuu ka baqi jiray iskoolka iyo inuu dadka hortooda ka hadlo. Wuxuu inta badan ka baqi jira xisada marka wax la weydiiyo oo wadnahaa aad u gaarcmi jiray gacmahan wuu ka dhididi jiray. Waxbarasho darteed hadii loo guuro degmo cusub iyo barashada dad cusub aad ayuu u cabsan jiray oo wuxuu dareemi jiray inay tahay arrin aad u adag.
Heikki intuu ardayga ahaa waxaa noloshiisa dhib weyn ku hayey xishoodka, laakiin wuxuu u arkayay in taasi ay waxba ahayn oo ay dabeecadiisa tahay. Haseyeeshee Heikki wuxuu ka dhigay in calaamadaha sida cabsida leh wareerka, gariirka iyo yaxyaxa ay sanadba sanadka kale sii kordhayaan. Heikki wuxuu si aada isugu mashquuliyay sida ay isaga dadka kale u arkaan markuu wejigabxo iyo markuu faranaxo ee xaaladaha kalduwan ee bulshada dhexdeeda.
Dhanka shaqada Heikki wuxuu ogaaday in cabsi kala kulmo kulmada shirarka ee kaladuwan iyo wax soo bandhigidda, taasoo u keenta inuusan hurdo fiican helin habeenka ka horeeya. Kulanka shirka kadib, Heikki Muddo dheer ayuu ka fikiraa in faranixiisa ay dareemeen dadka kale ee shirka ka soo qeybgalay. Waqtiyada firaaqada Heikki wuxuu bilaabay inuu aad isaga dhawro kulamada dadka cususb ama dadka uusan si fiican u aqoon.
Maxaa Heikki la gudboon?
Xishoodka Heikki ee bulshada dhexdeeda ayaa si kastoo ay ahaataba dhib ku haya marwalba noloshiisa. Muddooyinkii ugu danbeeyayna dhibtu way sii kordhay. Heikki waa fahansan yahay, in cabsida iyi kurbada xoogga badan ay mid uu ku khasban yahay xaalad iyo marxald kastaba, taasoo u keeneysa cabsi. Caawinaad raadsashada waxaa laga yaabaa iney ku dheeraato, waayo calaamadahaas wuxuu dareemayaa iney ceebyihiin oo ayna sii jiri doonaan muddo dheer oo uu dareemayaa inu sidaa yahay. Mararka qaarkood dadka leh calaamadahaas, waxay ku fikiraan inaan waxba laga qaban karin. Xaaladaha cabsida bulshada dhexdeeda waxbaa laga qaban karaa oo waa in caawinaad la raadshaa, si ay dhibaatooyinku u sii kordhin.
Xaaladaha cabsida bulshada dhexdeeda Finland waa arrin guud, sidaas awgeed Heikki wuxuu leeyahay saaxiibo qadarin badan. Xaaladaha cabsida bulshada dhexdeeda waxaa lagula tacaali karaa tusaale ahaan teraabiyada dhimirka iyo calaamadaheedana waxay leeyihiin daawo waxaa caanidaad loo doonan kara qolyaha aqoonta u leh sida takhtarka (shaqada) ama saykolojiga (caafimaadka shaqada). Ka wadahadlidda cabsida, soo ifbaxeeda iyo sababihii kaloo suurtogal ahba waxay sahleeysaa in laga guuleysto cabsida.
Mararka qaarkood waxa cabsida keena, in hadda ka hor ay jirto khibrad xun ama waxyaabo ku taagan tusaale ahaan wax jeedin oo kale. Haddii cabsidu bilaabatay caruurnimadii, sida xaaladda Heikki, waxaa wanaagsanaan lahay in laga hadlo caruurnimadaba khibradda wax soo jeedinta. Ma sameen jiray Heikki caruurnimadiisi tusaala ahaan mid u qaadan jiray si daggan mise waxaa laga sugay inuu marwalba si sax wax usoo bandhigo? Cabsida gadaasheed waxa suurtogal ah iney jiraan khibrado iyo faham siyaadin kara dareenka qofka oo shli kara in cabsidu yaraato.
Haddi calaamada walaaca ay fudud yihiin ama wixii la xiriira tusaale ahaan haddiia ay atahay kaliya wax soo jeedin, waan adigu inaad saameyn ku yeelataa. Dadka ka cabsida wax soo jeedinta waa iney maankooda geliyaan xaaladaha kale ee cabsida leh oo ay ka fikiraan maxay yihiin waxyaabaha u fududeynaya xaaladdaas si ay uu uga gudbo. walaaca waa laga yaabaa inuu yaraado haddii si daxadar leh ugu diyaargarowdo oo sidaad rabto xaaladda ku marto.
Waxaa sidoo kale kaa caawin kara cabsida, inaad u sheegato qaraabadaada, saaxiibadaa iyo saaxiibada shaqada cabsida ku heysa. Markaad u sheedagto arrin taada dad kale, cabsidu waxay noqoneysaa mid aad la qabsato oo mardanbe aadan sidaas uga sii baqin. Badanaaba waxa dhici karo in qof qaraabada ka mid ah ay haysato cabsida, taaso aad isdhaafsan kartaan khibradda iyo tusaaleynta.
Heerwalba oo khalad ah ee ka dhaca nolosha marwalba waa in aad aqbashaa. Cabsida waa inaad adigoo og si kutalagal ah u soo bandhigtaa. Cabsida wax soo bandhigiddu leedahay ma aha mid ku hareysa inaad ka leexato: badanaaba khibradaha badan oo aad ku guuleysato waxaad ku dareemi kartaa soo bandhiggu inuu noqdo mid xiiso leh oo noqota mid soojiidasho leh dhanka nolosha.